Maxaa ka jira in Saadaq Joon kulan la qaatay Farmaajo? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa ka jira in Saadaq Joon kulan la qaatay Farmaajo?
Saadaq Cumar, wuxuu ka mid ahaa, saraakiil muddo dheer la soo shaqeyneysay kooxdaan, wuxuuna qeyb weyn ku lahaa xasuuqii 17 December 2017, ka dhacay xarunta Xisbiga Wadajir, halkaas oo lagu laayay ilaaladii hoggaamiyaha Xisbiga, Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dabagal ay Keydmedia Online, ku sameysay, wararka sheegaya in Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan (Joon), uu kulamo kala duwan dhawaan caasimadda kula qaatay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaan ku ogaannay, in xaqiiqo ahaan warkaas uu sax yahay.
Ilo lagu kalsoon yahay oo dhinacyo kala duwan ah, ayaa KON, si buuxda ugu xaqiijiyay in Saadaq Joon uu habeenkii Jimcaha 6-dii bishaan, kulan kula qaatay garoonka diyaaraha agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, ka hor inta aysan wadajir ugu tagin Farmaajo, habeenkii uu soo galayay Sabatiga.
Is-aragga hore ee Fahad iyo Saadaq, waxaa fududeeyay Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor, kaas oo Muqdisho u yimid ka qeyb galka shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee shalay soo gabagaboobay, waxaana Joon la geeyay xaafiiska Farmaajo, si uu Madaxweynihii hore ula qaato kulan u jeedkiisa lagu sheegay is cafin.
Sida ay xoguhu tilmaamayaan Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, wuxuu ka mid yahay mushaixiinta doonaya in ay sanadkaan galaan Baarlamaanka 11-aad ee JFS, wuxuuna Dhuusamareeb uga soo laabtay inuu cafis weydiisto Farmaajo iyo Fahad si Qoorqoor oo ay heyb hoose yihiin u soo siiyo kursi barlamaan.
Kursiga uu Joon raadinayo, waa midka uu u sharaxan yahay Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee Aqalka sare, Senator Abshir Axmed Maxamed [Bukhaari], kaas oo Qoorqoor, sanadkaan u soo celiyay Golaha Shacabka, maadaama uu Aqalka Sare u raray kursiga HOP-248 oo uu ku fadhiyey xildhibaan Abtidoon.
Abshir Bukhaari, wuxuu sabab u ahaa in Aqalka sare, meel adag kaga soo jeesto fidnada Farmaajo, shanti sano ee la soo dhaafay, sidaas daraaddeed, waxay kooxda waqtigu ka dhamaaday soo dhaweynayaan tallaabo kasta Bukhaari ku weyn karo kursi, waana sababta ay ula heshiinayaan Saadaq Joon.
Saadaq Cumar, wuxuu ka mid ahaa, saraakiil muddo dheer la soo shaqeyneysay kooxdaan, wuxuuna ku lug lahaa xasuuqii 17 December 2017, ka dhacay xarunta Xisbiga Wadajir, halkaas oo lagu laayay ilaaladii hoggaamiyaha Xisbiga, Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
12 April 2021, wuxuu hor istaagay isku-daygii muddo kordhintii Farmaajo, wuxuu diiday in xubno yar oo ka tirsanaa baarlamaanka 10-aad gudaha u galaan xarunta Golaha shacabka, taasina waxay sababtay inuu ku waayo xilkii uu hayay isla-markaana laga rifo garaaddihiisii, lana seejiyo xuquuqaadkiisii ciidan.
Wuxuu qeyb lixaad leh ka qaatay dadaalladii Badbaado Qaran, ee lagu doonayay in dalku uusan dib ugu laaban gacan kali-talis, hayeeshee, wuxuu hadda u muuqdaa inuu Fahad iyo Farmaajo, u daba-fadhiyo kursi uu xaq u leeyahay inuu u tartamo, ku guuleyso ama looga guuleyso.
Tallaabada uu qaaday Joon, waxa ay muujineysaa mabda’ la’aantiisa iyo inuu ka arradan yahay mowqif ku sugnaanshaha, wuxuuna mar kale, dib ugu laabanayaa kooxdii uu ku dhawaad hal sano ka hor ka diiday in ay sharci darro ku sii joogaan Madaxtoyada oo aan mabda’oodii is baddelin.
Farmaajo, wuxuu wadaa la kulanka saraakiisha ka aragtida duwan, wuxuuna dhawaan qaabilay Xassan Jaamici iyo Ismaan Xaadoole, oo ka mid ahaa hoggaamiyayaashii Badbaado Qaran.